Maxay salka ku heysaa booqashada Abey Axmed uu ku tagay Suudaan? – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maxay salka ku heysaa booqashada Abey Axmed uu ku tagay Suudaan?
On Jun 9, 2019 305 0
Abey Axmed, oo ah ra’iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa booqasho ku tagay magaalada Al-khardhuum ee caasimadda wadanka Suudaan, halkaas oo uu kulamo kula yeeshay golaha milliteriga iyo kooxaha Mucaaradka.
Abey Axmed oo ay safarkiisa ku wehlinayaan xubno katirsna dowladdiisa, ayaa sheegay inuu doonayo inuu dhex dhexaadiyo golaha milliteriga iyo kooxaha mucaaradka, waxaana uu soo jeediyay in labada dhinac ay wada hadlaan.
Madaxda uu kulamada la yeeshey waxaa kamid ah Cabdil-fataax Al-burhaan oo ah madaxa golaha milliteriga, waxaana ay wada yeesheen kulan saacado socday, kaas oo lasoo sheegay in labada nin ay kaga wada hadleen sidii loo ambi qaadi lahaa wadahalladii joogsaday.
Wuxuu sidoo kale Abey Axmed, ra’iisul wasaaraha Itoobiya la kulmay xubno metalayay kooxaha mucaaradka ee doonaya in talada iyaga loo dhiibo, sheeganayana iney ku hadlayaan magaca shacabka dibad baxyada dhigaya.
Mucaaradka waxay ogolaadeen iney la fadhiistaan markale golaha milleteriga, balse waxay shardi ka dhigeen in golaha milliterigu qaato masuuliyadda dadkii uu ku laayay isniintii lasoo dhaafay afaafka hore ee xarunta taliska milliteriga.
Xogheynta warfaafinta ee Abey Axmed oo kamid ahayd wafdiga safarkiisa ku wehlinayay ayaa sheegtay in magaalada Al-khardhuum looga soo tagay la taliyaha ra’iisul wasaaraha, si uu uga sii shaqeeyo isku soo dhaweynta Mucaaradka iyo golaha, waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Waxaa muuqaneysa in dowladda Itoobiya ay dooneyso in galaan gal ballaaran ku yeelato arimaha dalka Suudaan, si ay u damaanad qaado iney dalkaas ka hesho dad u dhega nugul siyaasadda iyo damaca fog ee dowladda xabashida Itoobiya.
Abey Axmed masoo hadal qaadin intii uu ku sugnaa dalka Suudaan gumaadkii ay golaha milliterigu u geysteen dadka shacabka ah, taasi oo muujineysa in waxa dhacay ay raalli ka yihiin, sidaasina waxaa qabo badi shacabka reer Suudaan.
Kacdoonka Suudaan ee xilka looga tuuray kaligii taliyihii mudada dheer maamulayay Suudaan ee Cumar Xasan Al-bashiir ayaa wajahaya shirqoollo caalami ah, waxaana iyadoo ay sidaas jirto hadana shacabku ay la’yihiin hogaan dhab ah oo usoo dhiciya waxay doonayaan.
Inta badan siyaasiyiinta sheeganaya iney ku hadlayaan magaca kacdoonka ayaa lagu eedeynayaa inaaney waxba dhaamin nidaamkii hore, keliyana yihiin dad jaga doon ah oo doonaya in dhiiga shacabka Suudaan ku helaan kursiga xukunka.
Lama oga sida uu ku dambeyn doono kacdoonka Suudaan oo ay Aqoonyahanadu ku tilmaamayaan inuu yahay mid agoon ah, wajahayana shirqoollo caalami ah, waxaana hubaal ah haddii aan duruus laga baran kacdoonnadii hore in kanina dhamaadkiisa uu noqon doono mid xanuun badan.
Axmad 3445 posts 8 comments
Warbixin: Dagaalka Gobolka Tigreega ee Wadanka Itoobiya Oo Soo laba Kacleeyay.
Kulan Reer Mudug Looga Wacyigelinayay Ka qeybgalka Doorashooyinka oo ka dhacay…
Weeraro ka kala dhacay Muqdisho iyo Qeybo kamid ah Jubbada Hoose. (Dhagayso)
Gobolka Tigreega waxaa laga soo sheegayaa dagaallo xoogan oo dhexmaraya ciidamada federaalka Itoobiya iyo…
Kulan Reer Mudug Looga Wacyigelinayay Ka qeybgalka Doorashooyinka oo…
Weeraro ka kala dhacay Muqdisho iyo Qeybo kamid ah Jubbada Hoose.…